I-Private Studio itholakala enhliziyweni ye-Uptown - I-Airbnb
I-Private Studio itholakala enhliziyweni ye-Uptown
Lesi sikhala siyistudiyo esizinikele ku-Airbnb ngokugcwele. Hamba kancane maphakathi ne-Uptown Minneapolis ephithizelayo kanye nohambo lwekhebhu lwemizuzu engu-8 ukuya noma yikuphi eDowntown. Iphakathi ngqo neHennepin neLyndale Avenues, 1/2 mile ukusuka; isitobhi sebhasi, isikhungo sezitolo saseCalhoun Square, amachibi amaningi nezindlela zokuhamba, kanye nobuciko namasiko. Indawo yami ilungele izithandani, izihambi ezizimele, noma abahambi bebhizinisi.
***Manje ine-air conditioning!***
Uthola konke ukunethezeka kwekhaya kusitudiyo esihle nesihlangene. Lesi sikhala siyisitudiyo sangasese sangemuva se-triplex, esiphelele ngokupaka umgwaqo ozinikele kanye nokungena kwangasese. Ikhishi lincane kodwa liphelele, igumbi lokugezela lisanda kubuyekezwa futhi umbhede nomatilasi kuhlukile. Ithokomele kakhulu futhi ikhululekile. ***Manje ine-air conditioning!***
4.81 out of 5 stars from 412 reviews
4.81 · 412 okushiwo abanye
Ngivulekele umbhalo noma i-imeyili nganoma yisiphi isikhathi :)
Inombolo yepholisi: STR-117782